Yohane 2 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
2 Ke kaloku ngomhla wesithathu kwabakho itheko lomtshato eKana+ yaseGalili, yaye unina+ kaYesu wayelapho. 2 UYesu nabafundi bakhe babemenyiwe nabo kwelo theko lomtshato. 3 Yathi yakunganeli iwayini unina+ kaYesu wathi kuye: “Abanawayini.” 4 Kodwa uYesu wathi kuye: “Ndinantoni yakwenza nawe, mfazi?+ Ilixa lam alikafiki.”+ 5 Unina wathi kwabo balungiselelayo: “Nakuphi na anixelela kona, kwenzeni.”+ 6 Kwakukho iingqayi zamanzi zelitye ezintandathu zihleli apho njengoko kwakufuneka ngokwemithetho yokusulungekiswa+ yamaYuda, nganye inokungena imilinganiselo emibini okanye emithathu yamanzi. 7 UYesu wathi kubo: “Zizaliseni ngamanzi iingqayi zamanzi.” Kwaye bazizalisa ukusa eludinini. 8 Waza wathi kubo: “Yikhani intwana ngoku nize niyithabathe niyise kumalathisi wetheko.” Ngoko bayithabatha. 9 Akuwangcamla umalathisi wetheko amanzi awayejikwe aba yiwayini+ kodwa engawazi umthombo wayo, nangona abo balungiselelayo ababewakhile amanzi babesazi, umalathisi wetheko wabiza umyeni 10 waza wathi kuye: “Wonke omnye umntu ukhupha iwayini entle kuqala,+ aze xa abantu beyotyiwe, ibe yenganeno. Wena uye wayibeka iwayini entle de kwangoku.” 11 UYesu wakwenza oku eKana yaseGalili njengokuqala kwemiqondiso yakhe, yaye walubonakalisa uzuko lwakhe;+ baza abafundi bakhe bakholwa kuye. 12 Emva koku yena nonina nabantakwabo+ nabafundi bakhe behla baya eKapernahum,+ kodwa abahlalanga ntsuku zininzi apho. 13 Ke kaloku ipasika+ yamaYuda yayikufuphi, waza uYesu wenyuka waya eYerusalem.+ 14 Yaye etempileni wafika kukho abo babethengisa iinkomo nezimvu namahobe+ nabananisi bemali besezihlalweni zabo. 15 Ngoko, emva kokwenza iziniya ngentsontelo, wabagxotha etempileni bonke abo babenezimvu neenkomo, waziphalaza iingqekembe zabatshintshi bemali waza wazibhukuqa iitafile zabo.+ 16 Wathi kwabo babethengisa amahobe: “Zisuseni ezi zinto apha! Musani ukuyenza indlu yokurhweba+ indlu+ kaBawo!” 17 Abafundi bakhe bakhumbula ukuba kubhaliwe kwathiwa: “Ukuzondelela indlu yakho kuya kundidla.”+ 18 Ngoko ke, ekuphenduleni, amaYuda athi kuye: “Nguwuphi na umqondiso+ onawo ongasibonisa wona, ekubeni usenza ezi zinto?” 19 Waphendula uYesu wathi kuwo: “Yichitheni le tempile,+ yaye mna ndiza kuyivusa ngeentsuku ezintathu.” 20 Ngoko ke amaYuda athi: “Le tempile yakhiwa ngeminyaka engamashumi amane anesithandathu, yaye wena woyivusa ngeentsuku ezintathu na?” 21 Kodwa wayethetha ngetempile+ yomzimba wakhe. 22 Kwathi akuvuswa kwabafileyo, abafundi bakhe bakhumbula+ ukuba wayedla ngokukutsho oku; baza basikholelwa iSibhalo nelizwi uYesu awalitshoyo. 23 Noko ke, xa wayeseYerusalem epasikeni, emthendelekweni wayo,+ abantu abaninzi bakholwa egameni lakhe,+ bebona imiqondiso yakhe awayeyenza.+ 24 Kodwa uYesu wayengaziyekeli+ kubo ngenxa yokuba ebazi bonke 25 nangenxa yokuba kwakungekho mfuneko yokuba afumane nabani na wokungqina ngomntu, kuba yena ngokwakhe wayekwazi oko kwakusemntwini.+